नागरिकतामा कडाइ नगरे निर्वाचनपछि देश नेपालीको हातमा रहदैन: प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा
प्रदेश २ का प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’ले निक्कै संवेदनशील प्रक्षपण गरेका छन् । उनले नागरिकतामा कडाई नगरे दुईटा निर्वाचनपछि देश नेपालीको हातमा नरहने आँकलन गरेका हुन् ।
उनी मधेस सवालमा विशेषज्ञ समेत हुन् । एक टिभीमा अन्तरवार्ता दिँदै प्रमुख झाले नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। जनसिद्ध नागरिकलाई बंशज नागरिकता दिने सरकारको निर्णयको उनले विरोध गरेका छन् ।
सहज तरिकाले जीमेल, फेसबुक र ट्वीटरको एकाउन्ट बनाउन पाएजस्तो सहज रुपले नागरिकता वितरण हुनसक्ने आशंका गर्दै उनले त्यसो हुन नदिन जोड दिएका छन् । नागरिकता जानकी मन्दिर र पशुपतिनाथ मन्दिरमा लाइन लागेर पाइने कुरा नभएको उनको तर्क छ । उनले यहाँका बंशजहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अंगिकृत नागरिकलाई राज्यको उपल्लो तहमा नियुक्ति दिन नहुनेमा उनको जोड छ । उनले भनेका छन् विश्वका केही मुलुक बाहेक अधिकांश देशहरुमा अंगिकृत नागरिकलाई उपल्लो दर्जामा पुग्ने हैसियत दिइन्न ।
तर नेपाल त खुला सिमा भएको देश हो । यो सहजता दिइयो भने विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको चीनलाई समेत जनसंख्यामा उछिन्न लागेको भारतको ठूलो जनसंख्या नेपाल आउँछ ।
त्यो बेला धान्न सक्ने अवस्था हुन्न । अहिले नै सचेत हुनुपर्छ । भारतमा नेपालको भन्दा मुद्रा बलियो छ । त्यहाँका गरिबहरुपनि नेपाल आए भने यहाँ सम्पन्न बन्न पाउँछन् । यसैले ठूलो जनसंख्या नेपाल आउँनसक्छ । यस्तो अवस्थामा देश कंगाल बन्न सक्छ । अंगिकृत नागरिकबाट देशको राष्ट्रियता कहीपनि संरक्षण नभएको उनको तर्क छ ।
२०७८ असार ३, बिहीबार ००:२७0Minutes 152 Views